Tuhun ku aadan in natiijooyinka Tayniska laga heshiiyo - BBC News Somali
Tuhun ku aadan in natiijooyinka Tayniska laga heshiiyo
Image caption BBC ayaa heshay waraaqo cadaymo ah oo muujinaya in uu jiro tuhun ku aadan in laga sii heshiiyo natiijooyinka ciyaaraha Tayniska
BBC iyo BuzzFeed News ayaa helay Waraaqo qarsoodi ah oo muujinaya cadaymo la xiriira in ay jiraan waxyaabo badan oo tilmaamaya tuhun la xiriira in ay khayaano ka jiro tartamada Teniska adduunka ugu caansan sida Wimbledon, khayaanooyinkaas ayaa lagu sheegay in ciyaartoydu ayba ku sii heshiiyeen cida badinaysa ama natiijada.
Waaxda ilaalisa sumcadda Tayniska ayaa muujiyay dareen ah in 16 ciyaaryahan oo ka mid noqday 50 ka ruux ee ugu wanaagsan ciyaaridda Tayniska adduunka ay u qasdeen in ciyaarta laga badiyo arrintaasina ay dhacday tobankii sano ee u dambeeyay.
Ciyaaryahanadaas dhamaantood waxaa loo ogolaaday in ay ciyaaraha sii wataan iyaga oo qaarkoodna ay ku guulaysteen koobab qaali ah.
Waaxda ilaalisa sumcadda Tayniska ayaa sheegay in aan loo dulqaadanaynin in laseemyo musuqmaasuq bakhtiyaanasiib la xiriira.
Macluumaadka BBC iyo Buzzfeed News loo dusiyay waxaa ku jira natiijada baadhitaan ay sameeyeen 2007 ururka xirfadleyaasha Tayniska ee magaciisa loo soo gaabiyo ATP.
Hawsha markaas loo la baarayay waxay ahayd bakhtiyaanasiib laga shakiyay intii ay ciyaarayeen Nikolay Davydenko iyo Martin Vassallo Arguello.
Labadaas ciyaartooy ayaa lagu waayay in ay ku xadgudbeen shuruucda ciyaaraha, balse baaritaanka ayaa noqday mid ballaaran oo lagu eegayo dadka khamaarka internetka ku dheela ee xiriirka la leh ciyaartooyda sareysa.